အထွေထွေသတင်း | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: အထွေထွေသတင်း
UN recommends measures to address ongoing food insecurity in cyclone-hit areas March 19, 2016 ENGLISH, အထွေထွေသတင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် 17 March 2016 – More than seven months after Cyclone Komen struck Myanmar, poor rural communities are still seeing increased levels of food insecurity,asituation highlighting their vulnerability to withstand similar emergencies in the future, warnsajoint United Nations agency report released today. In particular, people in the hardest-hit areas of
Read More Equality Myanmar ရဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်စာတမ်း ထုတ်ပြန် February 29, 2016 အထွေထွေသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်စွာယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့်တွေ ချိူးဖောက်ခံနေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် လေ့လာပြုစုထားတဲ့ သုံးသပ်ချက်စာတမ်းကို ညီမျှချင်းမြန်မာ Equality Myanmar က ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ Equality Myanmar က ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိူးမင်းက “ဒီသုတေသနက ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရာ အားလုံးကို ကျနော် အခြေအနေအလိုက် လိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်တာ မရှိပါဘူ။ ဒါပေမဲ့ ရရှိတဲ့ သတင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ သုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့ မန္တလေးက ဘာသာပေါင်းစုံ ကိစ္စတွေကို ဖမ်းတာတွေ၊ နောက် ရန်ကုန်မှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကို ဈေးရောင်းခွင့် မပြုတာတွေ၊ နောက်တစ်ခုက ကရင်ပြည်နယ်မှာ
Read More အာရှ အဆင်းရဲဆုံး (၁၅) နိုင်ငံစာရင်းမှာ မြန်မာက ဒုတိယ February 25, 2016 အထွေထွေသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း အာရှတိုက်ရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးနဲ့ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ စာရင်းတွေကို နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ Asian Ranking အင်တာနက် စာမျက်နှာကနေ (၂၀၁၅) ခုနှစ် အာရှတိုက်ရဲ့ အဆင်းရဲဆုံး (၁၅) နိုင်ငံစာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက နံပါတ် (၂) နေရာမှာ ရှိနေကြောင်း VOA မြန်မာပိုင်း သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် လူတစ်ဦးချင်းဆီရဲ့ တစ်နှစ်စာ ၀င်ငွေအပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ထားတဲ့ ဒီစာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတစ်ဦးချင်းဆီရဲ့ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁,၇၁၁) ဒေါ်လာသာ ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံခြား ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ် အဓိက အားထားနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခုလို အာရှရဲ့ ဒုတိယ
Read More The Lady and the Boat Rides [in Burma/Myanmar] February 20, 2016 ENGLISH, ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း, အထွေထွေသတင်း Maung Zarni – TRANSCEND Media Service Brother, be kind, she is inabind. Nazi Aye Maung has gagged her from ever mentioning “the word Rohingya from your mouth” unless she is prepared to lose Rakhine support in Arakan. Against her presidential ambitions, Myanmar generals have unleashed Ma Ba Tha, i.e., Association for
Read More ကာတာတွင် ကျင်းပမည့် (၂၀၂၂) ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရက်များ ဖီဖာမှ ထုတ်ပြန် October 8, 2015 အာရပ်ကမ္ဘာ, အထွေထွေသတင်း ဖီဖာ (FIFA) ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ လာမည့် (၂၀၂၂) ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့် ရက်များအား သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (၂၀၂၂) ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား နိုဝင်ဘာ (၂၁) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဟု ဖီဖာမှ သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း အမေရိကန်အခြေဆိုက် ESPN သတင်းဌာနတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအား ဇွန်လတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်း ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ယခုကဲ့သို့ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလတို့တွင် ကျင်းပရန် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ (၂၀၂၂) ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား ကာတာနိုင်ငံ (Qatar) အတွက် အိမ်ရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံဦးဆောင်က အနောက်နိုင်ငံအချို့က